सु’त्केरी भएको ११ दिनमा पानीमा रा’तभ’रि डु’बायो ! म त्यो घरमा बु’हारी हैन नो’करा’नी थिए (भिडियो) – Tufan Media News
सु’त्केरी भएको ११ दिनमा पानीमा रा’तभ’रि डु’बायो ! म त्यो घरमा बु’हारी हैन नो’करा’नी थिए (भिडियो)
२३ फाल्गुन २०७७, आईतवार १८:०८
गुल्मीमा भएको एक घटनाले अहिले निकै चर्चा पाएको छ । प्रेम विवाह गरेकी सरस्वती सिस्देलले विवाह पछि मात्र थाहा पाइन् आफुलाई प्रेमको नाटक गरेर विवाह गर्नुको रहस्य अर्कै रहेछ । उनले विवाह गरेर गएको भोलीपल्ट वाटै उनलाई ब्यवहार फरक हुन थाल्यो । त्यती धेरै अपहेलाना सहेर बसेकी उनी जब सुत्केरी भइन् त्यसपछि उनी माथिको या त ना ले पाराकाष्ट नाघ्यो ।
कावासेतीमा रहेकी सरस्वतीले आफुलाई परेको कुरा सुनाउँदा कसैको पनि मन थाम्न सक्दैन । छोरी जन्मिएर जब उनी सुत्केरी भइन् त्यती बेला उनको शरिर कमजोर थियो । उनलाई स्याहारको खाँचो थियो । तर उनलाई कुम सम्म पानी आउने गरी डुवाएर राखियो । खान दिइएन ।
बुवाको निधन पछि दाईले नै उनलाई छोरी समान पालेर राखेका थिए । तर बहिनीले प्रेम गरेपछि उनले पनि बहिनीकै इच्छा अनुसार विवाह गरिदिए । तर ति दाईलाई बहिनीले यस्तो पी डा भोगेकी छन् भन्ने कल्पना पनि गरेका थिएनन् । विवाह गरेर गएपछ बहिनीलाई दाईसंग कुराकानी पनि गर्न दिइन्थेन । उनीहरुले मोवाइल दिन्थेनन् भने नेटको पासवर्ड पनि परिवर्तन गरिदिए ।
सरस्वतीको ठुलो बुवाको छोरा दाई विद्यालयको प्रधानअध्यापक छन् । सोही स्कूलमा उनका श्रीमान पढ्छन, उनै दाईको बदला लिन आफुसंग विवाह गरेको श्रीमानले बताएका थिए ।